पैसा नजोगिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् राशी अनुसारका उपाय – Khabar Silo
कतिपय मानिस चाहेर पनि कर्जाबाट मुक्ति पाउँदैनन् । भएको सम्पत्ति अनुसार खर्च बढी हुदा“ वा दैनिक खर्चलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ ।
कमाए पनि पैसा नै नजोगिने समस्याका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ होला ? यस्ता समस्याका कारण धेरै पीडित भएका हुन्छन् तर यसको समाधान पनि छ । धर्मशास्त्रका अनुसार राशी अनुसार यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउनका लागी मेष राशीका ब्यक्तिले हरीयो रंगको गणेश मुर्ति वा पिपल पातमा गणेश आकृती बनाई पूजा अर्चना गर्नुपर्छ । हरेक बिहान, गणेशलाई दूबो अर्पित गर्नुपर्दछ ।
वृष राशीका ब्यक्तिले देवी लक्ष्मीको बिषेश आरधना गर्नुपर्दछ । हरेक दिन रातो गुलाफको फुल अर्पित गरी लक्ष्मीको उपसना गर्नुपर्दछ । साथै शुक्रवारका दिन मिश्री दान गर्नुपर्दछ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउन मिथुन राशीका ब्यक्तिले हरेक मंगलवार ब्रत राख्नु पर्दछ । हनुमानजीको बिषेश आरधना गरी हनुमान मुर्तीको पाउ धुदा धनयोगको संयोग बन्नेछ ।
कर्कट राशीका ब्यक्तिले कर्जाबाट मुक्ति पाउन सकेसम्म मांसाहारी भोजन गर्नु हुदैन । सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ । साथै हरेक बिहिबार केरा दान गर्नाले समेत कर्जा हट्नेछ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउन सिंह राशीका ब्यक्तिले शनिवार पीपलको फेदमा सरस्युको तेलमा दियो बाली दिप दान गर्नु पर्दछ । साथै फलामको औठि धारण गर्नुपर्दछ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउन कन्या राशीका ब्यक्तिले शिवजीलाई पानिमा तिल मिसाएर उक्त जल अर्पण गर्नुपर्दछ । साथै शनिवारका दिन पारेर मिठो तथा गुलियो परीकार दान गर्नुपर्दछ ।
तुला राशीका ब्यक्तिले बिहिबार विष्णु सहस्त्रनामको पाठ गर्नुपर्दछ । सकेसम्म उक्त दिन पहेलो रंगको वस्त्र धारण गरेमा बिशेष लाभ हुने गर्दछ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउन वृश्चिक राशीका ब्यक्तिले हरेक मंगलवार हनुमानजी लाई तुलसीको दल अर्पित गर्नुपर्दछ । साथै बुधवार पशुलाई चारो ख्वाउनु पर्दछ ।
धनु राशीका ब्यक्तिले हरेक बिहान भगवान विष्णु र देवी लक्ष्मीको पुजा उपासना गरे कर्जाबाट मुक्ति मिल्नेछ । साथै हरेक शुक्रवार कन्याहरुलाई सेतो मिठाई बाडेमा तत्काल धनयोग हुनेछ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउन हरेक बिहान गणेशजीको आरधना र आरती गर्नुपर्दछ । साथै हरेक बुधवार गणेशजी लाई हरीयो रंगको इलाइची अर्पित गरी प्रसन्न बनाएमा धन प्राप्ती हुनेछ ।
कुम्भ राशीका ब्यक्तिले हरेक सोमवार शिवलिंगमा गंगाजल अर्पित गर्नाले कर्जाबाट मुक्ति पाउनेछन् । सेतो रंगको रुमालमा सेता अक्षता पूजा स्थानमा राखेमा धनयोग बन्नेछ ।
कर्जाबाट मुक्ति पाउन मीन राशीका ब्यक्तिले नित्य सूर्य देवलाई बिहान जल अर्पित गर्नुपर्दछ । साथै हरेक आइतबार गाईलाई सख्खर र रोटि ख्वाउनाले साता भित्रमा धनयोग बन्नेछ ।
कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जिप्रका काठमाडौंद्वारा अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा स्थगित
Posted on October 13, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं, २७ असोज । कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या तीब्र रुपमा बढिरहेका र चार जना कर्मचारीमा समेत कोरोना पुष्टि भएपछि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै सेवा स्थगित गरेको छ । जिल्ला प्रशासनले मंगलबार (आज) प्रेस विज्ञप्ती राजी गर्दै संक्रमणको जोखिम बढेको र ४ जना कर्मचारीमा समेत कोरोना पुष्टि भएपछि […]
भोलिदेखि लामो दूरीका गाडी चलाउने निर्णय त भयो, तर तयारी छैन
Posted on September 16, 2020 Author khabar silo
काठमाण्डाै – सरकारले भोलि असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी खोल्ने भने पनि यातायात व्यवसायीले आवश्यक तयारी अगाडि नबढेको बताएका छन् ।यसअघि असोज ५ गतेदेखि भने पनि सरकारले एकाएक निर्णय फेरेकाले तयारी नभएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । ६ महिनासम्म थन्किएका गाडीलाई मर्मत नगरी गुडाउन नसकिने भएकाले तत्काल गाडी चलाउन सकिने अवस्था […]
काठमाडौं । शुक्रवार विहानै देखि मुलुकका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसँगै परेको चट्याङ परेको छ । चट्याङका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ । बिहिबार राति परेको चट्याङका कारण एकजना घाइते भएका छन् । ठूलो वर्षा नभएका कारण तुँवालेले छोपेको काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ । केही स्थानमा विहान देखि […]
कोरोनाका थपिए नयाँ लक्षण